Minisiteran’ny fanatanjahantena : nisongadina ny zava-bitan’ny tanora | NewsMada
Minisiteran’ny fanatanjahantena : nisongadina ny zava-bitan’ny tanora
Tsara ny vokatra ho an’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, ho an’ny taona 2017 araka ny tatitra nataon’ny minisitra Andriamosarisoa Jean Anicet, nandritra ny fambolen-kazo, nataon’ny mpiasan’ny minisitera, teny Carion, omaly zoma. Raha ho an’ny vokatra teny ambony kianja, betsaka ireo tanora no lasa tompondaka eran-tany sy kaontinantaly ary rezionaly. Anisan’ny niavaka tamin’ireny ny zava-bitan’ny tsipy kanetibe.
Ho an’ny asa miandry amin’ity taona 2018 ity indray, anisan’ny goavana ny fampandehanana ireo atleta 90 mianadahy, hiofana any Sina, mandritra ny telo volana. Fifanaraham-piaraha-miasa, eo amin’ny governemanta roa tonta. Eo koa ny fifanakalozana miaraka amin’i Maraoka, ka hisian’ireo atleta sy teknisiana handeha ho any. Nomarihiny fa tafiditra amin’ny fanomanana ny fiatrehana ny lalaon’ny Nosy (JIOI 2019), hatao atsy Maorisy, ary koa ny fifanintsanana, hiatrehana ny lalao Olympika 2020, hatao any Japon, izany. Ankoatra izay, efa eo am-piomanana ny lalaon’ny CJSOI 2018, any Djibouti, ho an’ireo ankizy miisa 160 ny minisitera. Tsy Hadino koa ny lalao Olympika, amin’ny andro ririnina, hatao any Korea.
Efa miisa 9 ireo “Plateau sportif”, naorina miampy ny fanarenana ireo tranom-panjakana, niaraka tamin’ny fampitaovana, ireo tale rezionaly miisa 22. Teo koa ny fanaparitahana, tsatoby miisa 50 ho an’ny kaominina 35, eo amin’ny baolina kitra sy ny an’ny volley-ball.
Nisy fifanarahana fiaraha-miasa eo amin’ny vaomiera manokana misahana ny fifidianana (Ceni), hanentanana ny tanora handray andraikitra. Fantatra fa hisy tanora 50 mianadahy hahazo famatsiana, amin’ny fandaharanasany, tafiditra amin’ny tetikasa (Confejes).
Tsiahivina fa zana-kazo 2000 fototra no nambolena, tamin’ity ka nisy ireo fihinam-boa ary teo koa ny fanao haingona tokontany.